Inhloko-dolobha enyakatho yombuso iSt. Petersburg - idolobha elinabantu abangaphezu kwezigidi eziyisihlanu. Lesi yisikhungo esibaluleke kakhulu sezomnotho, semasiko, semfundo, ihabhu elikhulu lokuthutha. I-St. Petersburg yidolobha elikhulu kunazo zonke eRussia, abantu abavela kwezinye izindawo bafika lapha ukuze baphile unomphela. Akubona bonke abakhetha indawo yokulungiswa kwedolobha. Abantu abaningi bakhetha amadlelo asuke ekhululekile kakhulu ekubukeni kwezinto eziphilayo. "I-Quarter River" eGatchina inikeza isixazululo esihle kulabo abafuna ukuthenga indawo endaweni yesifunda saseLeningrad.
Okuncane mayelana ne-Gatchina
I-Gatchina idolobha elingamakhilomitha angu-42 eningizimu-ntshonalanga enkabeni yeSt. Petersburg. Isibalo salo singabantu abangaba yizinkulungwane eziyikhulu, futhi cishe sekukhula njalo. Ngakho-ke, i-Gatchina ibhekwa njengendawo ethembisayo yabathuthukisi bezindlu. Isibonelo esicacile salokhu yikota e-Gatchina "Rechnoy".
Indawo yinkimbinkimbi yokuhlala
Uhlelo olusha lwe-multi-strey project kusukela kumthuthukisi we-Gatchinsky KKZ CJSC - ikota lokuhlala "Rechnoy" - lakhiwe ngasemngceleni oseningizimu weGatchina endaweni yeNcane Kolpanov. Lena yi-microdistrict "i-Aerodrom". Uma ukhuluma ngekheli eliqondile lendawo eyinkimbinkimbi, khona-ke lesi yisifunda seRechnoy, ekhaya kusukela enombolweni 1 kuya ku-4. Ngaphandle kwezakhiwo zokuhlala, engxenyeni kukhona inkulisa yezindawo ezingu-140. Inombolo yendlu yakhe ingu-5.
Njengoba sekushiwo kakade, i-Gatchina itholakala enkabeni yaseSt. Petersburg endaweni engamakhilomitha angu-42. Ukuze ufinyelele "Emgodini Wesigodi" (Gatchina), kufanele ushiye umuzi umgwaqo omkhulu wasePulkovskoe, udlule eKiev. Khona-ke, ngemva kokudabula edolobheni laseKiev, iya emgwaqweni u-Staraya Doroga, udlulela eNkabeni. Ikhomitha itholakala cishe emthini wezokuthutha, okwenza ukufika kuyo kube lula kakhulu. Isikhathi sokufika esiteji esiseduze sesiteshi "Zvezdnaya" ngemoto asithathi ngaphezu kwengxenye yehora. Ukusondela kulo muzi omkhulu kwenza indawo yokuhlala e-LCD "River Quarter" (Gatchina) ekhangayo kakhulu. Ngaphezu kwalokho, kunezinhlobo eziningi zokuthutha komphakathi, ongafinyelela endaweni yakho yomsebenzi eSt. Petersburg noma eGatchina nasemuva. Lezi yizindiza zokuhamba, amabhasi kanye nezitimela zokuhamba ngegesi.
Incazelo yenkimbinkimbi yokuhlala
Isakhiwo sinezakhiwo ezimbili zezakhiwo zokuhlala, enye yazo inezindlu ezingu-194, kanti eyesibili - ye-101. Izakhiwo zokuhlala zakhiwe ngobuchwepheshe be-brick-monolithic, ngenxa yokuthi amafulethi azohlala efudumele futhi ehlelekile cishe kuzo zonke izimo zezulu. Le induduzo nayo izofaka isandla kumafasitela kabili afakwe amafasitela afakwe kuwo wonke amafasitela e-complex complex.
E-"Quarter River" eGatchina, lo msebenzi uhlinzeka ngezindlela ezihlukahlukene nezakhiwo ze-metrazhu: kusuka kwelinye igumbi kuya emakamelweni amathathu. Indawo yabo ivela kumamitha angama-39 kuya kwangu-90 square. Cishe zonke izindlu zokuhlala zineloggias nama-balcony nge-glazing ebandayo. Ukuphepha kwabanikazi bezindlu kubanikezwa ngama-intercom futhi kungenzeka ukuxhuma imishini yevidiyo. Induduzo nokufudumala nganoma isiphi isikhathi sonyaka kuzohlinzekwa yindlu yayo yokubilisa.
Ingqalasizinda eyinkimbinkimbi yangaphakathi
Izithombe zekota "Rechnoy" eGatchina zikhombisa ukuthi ingqalasizinda yangaphakathi ivumela izakhamizi kanye nezingane zabo ukuba zidlale ezindaweni zokudlala nasezizeni zezemidlalo, zihamba ngezinyawo futhi zijabulele umoya omusha. Ezingxenyeni ezintathu ibhokisi lizungezwe amapaki: Western, Priory, Dvortsov. Engeningizimu yayo kukhona ichibi elikhulu ngokwanele Kolpanskoe.
Zonke izinto zengqalasizinda zenhlalakahle ezidingekayo ukuze kube nokunethezeka kokuphila, zitholakala kwisakhiwo sokuhlala, cishe ngaphakathi kwebanga lokuhamba. Ngaphezu kwesibhedlela senu esivele sikhona, kunezinhlobo zokubeletha esifundeni kanye nezikole ezine zemfundo jikelele. Futhi emisebenzini yabakhileyo kukhona izitolo eziningi, ama-pharmacy, i-polyclinic kanye nehholo lezemidlalo.
Ukubuyekeza mayelana nendawo yokuhlala
Ukubuyekezwa mayelana "Nekota Yomfula" e-Gatchina sekuvele kuyatholakala kwi-Inthanethi ngamanani anele. Phakathi kwazo kukhona kokubili okuhle nokubi. Abathengi bemibono enhle bathi kaningi ngenxa yokuthi izindlu zesigaba sokuqala zakhiwa ngezitini. Lezizinto zokwakha zinomsindo omuhle kakhulu womsindo futhi zigcina i-microclimate ekhululekile emafulethini esikhathini esikude. Futhi, abathengi bezindlu zokuhlala bayaneliseka ngokukhetha kwabo ngenxa yamanani amancane okwakhiwa kwezindlu zangempela ezinikezwa unjiniyela. Ngokwesiko, izindlu ezibiza kakhulu kukhona ama-studios, lapho intengo yemitha eyodwa yikhilomitha angu-66 ayi-ruble. Iwona engabizi kakhulu - igumbi lesithathu. Intengo yabo yendawo eyodwa yemitha ayi-ruble ayizinkulungwane ezingu-48.
Cishe bonke abahlali abahlala kulezi zinkimbinkimbi banelisekile ngendawo ekhethwe unjiniyela ekwakheni iphrojekthi yabo. Le ndawo yindawo enesimo esihle kakhulu semvelo. Ezungezwe ngamapaki kanye nechibi, ikhefu linikeza izakhamuzi ithuba lokujabulela umoya omusha futhi zizwe injabulo yokuphila ngaphandle kwedolobha, emaphandleni.
Ngokuqondene nokubuyekezwa okungalungile, iningi lalo lihlobene nokuqhelelanisa okuyinkimbinkimbi kusuka eSt. Petersburg (amakhilomitha angu-42 ukusuka Ring Ring). Abanikazi bezimoto zabo futhi abathandi ukungabi khona komhlaba nokupaka inani elincane kakhulu lokupaka izimoto. Akuwona wonke umuntu othanda umkhono wokuqasha izindlu ekhaya nezindawo zokuhlala ezingenakuqedwa kwangaphakathi. Lokhu kungalondoloza izimali zabo ngokuphawulekayo, okuphoqelelwe ukuba bachithe emsebenzini wokulungisa.
Ukubuyekezwa mayelana nokuphenduka kwesibili ku-"Quarter River" e-Gatchina kufana neyinkimbinkimbi yonke. Okungeziwe okungaphezulu kuphela kwanezelwa ngenxa yekhwalithi yezinto zokwakha. Esigabeni sesibili, uhlelo lwesakhiwo sezindlu zokwakha lwalusetshenziswa. Ngezici zayo zekhwalithi, kuncane kakhulu kunotini. Ngaphandle kwalokho, azikho izikhalazo zomhlaba wonke. Yonke into engalungile isinganiselwe isimo esivumelana nesimo semvelo lapho umthuthukisi ekwazi ukubeka khona iphrojekthi yakhe ngempumelelo.
Kuyini Okubalulekile Uma Uthenga I-Cottage?
Yeka inzuzo kangakanani umnikelo wezingcebo
Amathilomu nezindawo zokudlela of Orenburg: uhlu ngezithombe
"Artek" ekamu. Camp "Artek" Wezingane. ECrimea, ekamu zezingane "Artek"
Ngopha emakhaleni, yini okufanele uyenze? Izimbangela Nezingozi izixazululo zezinkinga
Museum of Fine Arts. Pushkin. amaqiniso ezithakazelisayo
I-Anti-inflammatory agent "Celebrex": imiyalo yokusetshenziswa